Bit By Bit - Kubvunza mibvunzo - 3.5.2 Wiki kuongorora
Wiki kuongorora vakwanise nevaNefirimu itsva yakavharwa uye akazaruka mibvunzo.
Mukuwedzera kubvunza mibvunzo pane zvakawanda zvakasikwa nguva uye zvakawanda zvakasikwa achinzi itsva rwokugadzira Kunotibvumirawo kuchinja chimiro mibvunzo. mibvunzo Most ongororo dzakavharika, apo vakabvunzwa vanosarudza kubva yakatarwa sarudzo akanyorwa nevatsvakurudzi. Chinhu muitiro kuti munhu akakurumbira ongororo mutsvakurudzi Kushanya Somuenzaniso, pano pane namahwindo kuongorora mubvunzo "kuisa mashoko vanhu pamiromo.":
"Uyu mubvunzo unotevera uri panhau basa. Ungaverenga kutarisa kadhi iri uye kundiudza icho chinhu pamusoro nyora ichi mungadai vakawanda vanosarudza munhu basa? "
No mungozi kudzingwa basa;
Kushanda Maawa vane pfupi, mijenya rusununguko nguva;
Basa rinokosha, uye anopa pfungwa kubudirira.
Zvino pano zvimwechete mubvunzo vaibvunza pachena muchimiro:
"Uyu mubvunzo unotevera uri panhau basa. Vanhu kutsvaka zvinhu zvakasiyana pane basa. Chii hwaunonyanya vanosarudza munhu basa? "
Kunyange zvazvo mibvunzo iyi miviri sezvine yakafanana, imwe ongororo kuedza kubudikidza Howard Schuman uye Stanley nemuti (1979) yakaratidza kuti vanogona nezvibereko akasiyana chaizvo: 60% rakavhurika migumisiro kuwira kunze Mapato vari namahwindo mhinduro (Figure 3,7).
Figure 3.7: Zvabuda kubva Schuman and Presser (1979) . Mhinduro dziri kwakasiyana zvichienderana kana mubvunzo iri vaibvunza up kana pachena chimiro.
Kunyange zvazvo mibvunzo akazaruka uye akapfigwa kunogona ruzivo zvakasiyana uye vose vaiva yakakurumbira mumazuva pakutsvakurudza ongororo mangwanani, akadzivira mibvunzo vava dhomineta munda. Kudzora Izvi hazvisi nokuti mibvunzo up kunge rikaratidzwa kupa kuyerwa nani, asi zviri nokuti nyore kushandisa; muitiro Coding mibvunzo pachena-apera ndizvo yakaoma uye anodhura. Kutama kure mibvunzo pachena zvinosuwisa nokuti chaizvoizvo mashoko kuti nevatsvakurudzi vasingazivi mberi nguva inogona kuva chinokosha.
Mune dzimwe tsvakurudzo ndaitira pamwe Karen Levy, takaedza kusika pamusoro ongororo mubvunzo hwemhando itsva anosanganisa zvakanaka zviri zvose akazarurwa uye vakavhara mibvunzo (Salganik and Levy 2015) . Kureva, runoita vatsvakurudzi kudzidza mashoko matsva sapamazuva mubvunzo rakavhurika, uye kunobereka nyore kuongorora umboo sezvo vari mubvunzo Akanyatsovharwa. Zvarakafuridzirwa paIndaneti gadziriro nemhepo nemhengo-vanowanika kugutsikana, iyo Wikipedia chiri Muenzaniso, isu anonzi maitiro edu ari wiki Vasai ongororo. By combing hunhu Wikipedia uye tsika kuongorora, tinotarisira kuumba nzira itsva kubvunza mibvunzo.
The date muunganidzwa kwacho ari wiki Vasai ongororo zvinoratidzwa nezvakaitika purojekiti isu achiitira New York City Mayor Hofisi kuti nokusangana pfungwa vagari 'kupinda PlaNYC 2030, citywide kuenderera chirongwa New York. Kuti vatange muitiro, iye Mayor Hofisi vanowanika mazita 25 pfungwa inobva yavo yapfuura Mahofisi ngaave (semuenzaniso, "Anodei zvivako zvose guru kuti vamwe simba kunyatsoshanda upgrades," "Dzidzisai vana pamusoro mitema nyaya sorutivi chikoro hweutungamiri"). Kushandisa 25 pfungwa idzi se "mbeu," ari Mayor Hofisi akabvunza mubvunzo "Ndeupi Unofunga ipfungwa nani kusika munhu nani, mukuru New York City?" Vakabvunzwa vakanga paakapiwa peya pfungwa (semuenzaniso, "Open schoolyards mhiri muguta pachena nhandare "uye" Wedzero nangananga muti plantings munzvimbo dzakakwirira asima prices "), uye akakumbira kusarudza pakati pavo (Figure 3.8). Asarudza, vakabvunzwa vakanga pakarepo vakaisawo nomumwe randomly vakasarudzwa peya pfungwa. Vakabvunzwa vakakwanisa kuramba kuita mashoko pamusoro dzavo zvatinofarira chero zvavaida achishandisa kana kuvhota kana kusarudza "Ini handigoni kusarudza." Crucially, chero nguva, vakabvunzwa vakakwanisa kupa pfungwa dzavo, izvo-nyaya mvumo neDare Mayor Hofisi-vakava rutivi mudziva pfungwa kuti aendeswe kuna vamwe. Saka, mibvunzo kuti vatori vechikamu vanogamuchira ndiye zvose akazaruka uye yakavharwa panguva imwe chete.
Figure 3.8: inowanikwa nekuti wiki Vasai kuongorora kwakaitwa (Salganik and Levy 2015) .
The Mayor Hofisi yakatanga rayo wiki Vasai ongororo muna October 2010 pachiimbwa akatevedzana munharaunda misangano kuwana mugari dzinovaka. Over inenge mwedzi mina, 1,436 vakabvunzwa vakabatsira 31.893 mhinduro uye pfungwa itsva 464. Achitsoropodza, 8 pamusoro 10 scoring pfungwa dzakanga uploaded kuburikidza vechikamu pane chikamu yakatarwa mbeu pfungwa kubva Mayor Hofisi. Uye, sezvo isu tsanangura pepa wedu, iri muenzaniso zhinji wiki Vasai kuongorora. Mune mamwe manzwi, nokuva pachena mashoko matsva, vatsvakurudzi vanokwanisa kudzidza zvinhu kungadai vakarashika kushandisa namahwindo nzira kuti kukumbira.